Horton Plateau - Horton Plains National Park ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Horton Plateau - Faran'ny faran'ny tany (Horton Plains National Park)
Horton Plateau National Park - Horton Plains National Park. Nuwara Eliya
3 ny fanehoan-kevitra
Horton Plateau National Park Overview
Sarintanin'ny valan-javaboary. lalana
Slope "Faran'izao tontolo izao"
Torohevitra momba ny fitsidihana ny Plateau Horton
Ahoana no hahatongavana any. Ny vidin'ny fitsidihana
Fampahalalana mifandray. Zotra miasa miasa
National Park eo amin'ny sarintany
Weather on the Horton Plateau Andro ankehitriny
Hevitra ao amin'ny Park sy Plateau
Horton lemaka nasionaly - Izany dia iray amin'ireo zaridainam-pirenena Sri Lankan. Horton Plateau dia 32 km miala Nuwara Eliya.
Natsangana teto ity trano fitahirizana ity tamin'ny 1969, ary 20 taona taty aoriana dia nahazo ny toeran'ny zaridainam-pirenena izy. Mandrakotra ny faritany Horton 3 160 ha. Ity dia tany be lemaka sy be renirano ary be dia be feno hazo sy kirihitra.
Hita eto koa ireo riandrano hafahafa.
Horton dia toekarena voajanahary izay manana anjara toerana lehibe ara-tontolo iainana ho toy ny trano fonenana voajanahary ho an'ny zavamaniry sy biby marobe.
Ny lembalemba dia rakotra ala ala. Misy Karazan-biby mampinono 24, karazany 9 ny biby ary vorona 87 ary karazana amphibiana.
Matetika mandritra ny fitsangatsanganana ianao dia afaka hihaona amin'ny vorona maro be, primata, serfa, lolo sy amphibiana. Saingy tsy azo ialana ny loza ateraky ny mpametaka ho an'ny olombelona, ​​satria miaina ao amin'io faritra misy ny zaridainam-pirenena io ireo biby tsy avelan'ny mpizahatany.
Raha tsorina, ny fitsidihana ny zaridainam-pirenena dia midika fa an-tongotra 9 kilometatra mamakivaky ilay zaridaina (ny sarintanin'ny zaridaina sy ny lalana dia ao amin'ny lahatsoratra eto ambany).
Ankoatra ny zavamaniry isan-karazany, misy koa ny tendrombohitra avo toa izany Kirigalpotta (2 m) и Thotupola Kanda (2 m).
Tsy maintsy mandoa ny fidirana amin'ny zaridainanao ianao. Tapakila ho an'ny olon-dehibe sy ho an'ny ankizy 12 taona dia mitentina 4000 rupiah (22 dolara eo ho eo). Tapakila ho an'ny ankizy 6-11 no mitentina 3600 rupe ($ 18). Ny zaza tsy latsaky ny 6 taona dia omena alàlana maimaim-poana. Ny vidiny dia misy sarany serivisy, 1 800 rupee ny vidiny.
Raha tianao dia afaka mijanona ao amin'ny faritanin'i Horton Park ianao mandritra ny alina (avela), dia miakatra avo 2 heny ny vidiny.
Misokatra fito andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 6 a.m ka hatramin'ny 18 p.m. Mividy hatramin'ny 16 ora isan'andro ny tapakila.
Sarintanin'ny Horton Plateau National Park
Sarintany Lalana Horton Plateau National Park
Faran'ny faran'ny tany (Fiafarana kely ahd Big world)
Fijery avy eo amin'ny tehezan-java-manintona indrindra amin'ny Horton Plateau (Famaranana Eran-tany)
Angamba ny mahasarika olona ny zandarimariam-pirenena Horton lemaka nasionaly, dia faribolana iray antsoina hoe "faran'izao tontolo izao."
Ny tehezan-kavoana dia manamarika fa eo amin'ny haavon'ny haavony roa kilometatra izy ary misy hantsana mideza aloha amin'ny 328 metatra, ary avy eo misy 1312 metatra hafa.
Ary nantsoiny hoe faran'izao tontolo izao izy io, noho ny fisokafan-javatra mahagaga eo amin'ny tampony. Indrindra rehefa ny zavona na ny rahona no mamorona ny fanoharana feno fa ny eo anoloanao dia tena "faran'izao tontolo izao".
Ny faran'izao tontolo izao 🙂
Ny fanokafana Panoramas avy amin'ny lembalemba dia misy ifandraisany tanteraka amin'ny toetran'i Scotland, Norvezy ary Irlandy.
Isika dia misarika ny sainao amin'ny zava-misy fa ny zavona sy ny rahona mamorona ny fiantraikany tsara amin'ny faran'ny tontolo dia heverina ho hita eto maraina sy hariva. Amin'ny tolakandro, misy ny fahazoana mivaingana fa hisy votoaty mahafinaritra miaraka amin'ny panorama 🙂
Raha te-hahita biby mipetraka amin'ity zaridainam-pirenena ity koa ianao, dia ny maraina sy ny hariva no mihaona ny hihaona amin'izy ireo, satria mandritra ny andro dia matory ny ankamaroany.
Rehefa faran'ny herinandro, dia manana laza malaza eo amin'ny mpizahatany sy ny mponina ny Horton Plateau National Park. Koa tadidio foana fa afaka mitabataba sy feno olona izy ireo ankehitriny.
Ary amin'ny faran'ny herinandro, mety misy ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny olana eo amin'ny fiantsonana eo amin'ny fidirana mankany amin'ny zaridaina.
Afaka mandehandeha eny amin'ny zaridainanao ianao. Ny làlan-jotra mahazatra dia misy ny faran'ny tontolo ary ny riandrano roa manana halaviran'ny 9 km.
Raha mikasa ny hitsidika ny zaridaina maraina ianao, dia miakanjo mafana araka izay azo atao. Mandra amin'ny 9 maraina dia mangatsiaka be ary mahamay.
Raha fitsidihana feno any amin'ny zaridainam-panjakana, mitondrà 4 ora farafahakeliny.
Ahoana no hahatongavana any. vidin'ny
Horton Plateau no misy azy 32 km avy ao Nuwara Eliya.
Ny vidin'ny fitsidihana - 4000 rupe ho an'ny olon-dehibe
Ankizy 6 ka hatramin'ny 12 taona 3600 rupees
Ankizy latsaky ny 6 taona miditra maimaim-poana
Ny tarehimarika voatondro dia efa misy antontan-taratasim-bola tsy maintsy mandoa - 1800 rupees
Misokatra ho an'ny daholobe ny valan-javaboarim-pirenena. isan'andro manomboka amin'ny 6.00 a.m ka hatramin'ny 18.00 p.m.
Nekena tao amin'ny valan-javaboary hatramin'ny 16.00
telefaonina: + 94 523 539 042
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/1bh87cJ49b2StmUz9
Horton Plateau amin'ny sari-tany
Horton Plateau Park Reviews
Horton Plateau Review (Google reviews)
Horton Plateau National Park Reviews (Tripadvisor)
Tao amin'ny zaridainan'ny andro antoandro.
Tsara be ny fomba fijerin'ny andro lazaina fa andro fitsarana, na dia any Sri Lanka aza misy toerana maro tsara tarehy kokoa.
Ny riandrano dia tsy mahavariana.
Tsy voamarika ireo biby ao amin'ny zaridaina fa tsy isaina amin'ny diera iray sy fody iray. Fa angamba noho ny andro iray sy ny mitataovovonana iny andro iny, dia miafina ny hafanana sy ny olona ny biby.
Naharitra 4 ora ny dia an-tongotra.
Raha mandalo ianao dia manoro hevitra hitsidika aho.
Eny tokoa, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nisy hatrany ny famerenana momba ny valan-javaboary vitsy kokoa ary mihamaro ny olona.
Ny tombony amin'ny zaridaina dia tranga toa tsy dia misy dikany loatra - tavoahangy plastika, kaopy ary zavatra hafa izay matetika lasa fako amoron'ny làlana dia tsy azo entina ao amin'ny zaridainam-panjakana.
Misaotra an'izany dia tena madio ny zaridaina!